iOS 7နဲ့ ပတျသကျပွီး Complaintsမြား ~ The ICT.com.mm Blog
Appleမှ iPhoneအသဈမြား ထှကျရှိလာခွငျးနဲ့ အတူ iOS 7ကိုပါ တဈခါတညျး မိတျဆကျပှဲထုတျ ခဲ့ပါတယျ။ iOS 7မှာက ပွောငျးလဲ ပွငျဆငျမှုတှေ မြားစှာ ပွုလုပျခဲ့ပွီး ကွိုကျတဲ့လူတှေ ရှိသလို မကွိုကျတဲ့ လူတှလေညျး အမြားအပွားပါ။ ဒါကွောငျ့ အဆိုပါ iOS 7နဲ့ ပတျသကျပွီး အသုံးပွုသူတှရေဲ့ မကွိုကျတဲ့ အခကျြအခြို့ကို စုစညျးတငျဆကျ ပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ နံပါတျတဈကတော့ iOS 7မှာ ပါဝငျလာတဲ့ ပွားခပျြခပျြ iconတှဟော ကလေးတှေ အတှကျ ရညျရှယျဖနျတီးထားတာ ဖွဈတယျလို့ ဆိုနကွေပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Batteryသုံးစှဲ နှုနျးကလညျး အရမျးမွနျနပေါတယျ။
၂။ ဒါ့အပွငျ iOS 7ရဲ့ ထူးခွားခကျြ တဈခုဖွဈတဲ့ Control Centreမှာ Wi-Fi On/Offသာ လုပျနိုငျပွီး ဘယျ Wi-Fiကှနျရကျနဲ့ ခြိတျဆကျမယျ ဆိုတာကိုတော့ မရှေးခယျြနိုငျပါဘူး။
၃။ အရငျ Notificationအဟောငျး မှာလိုမြိုး Tweetလုပျလို့ ရတဲ့ ပုံစံကိုလညျး အခု စနဈအသဈမှာ သုံးခငျြပါသတဲ့။
၄။ ပွီးတော့ Conversationတဈခုမှာ Messageတှကေို ဖကျြခငျြရငျ တဈခါတညျး ‘Delete’ဆိုတာ မပါဘဲနဲ့ Copy, More… ဆိုပွီး အရဈရှညျအောငျ စီစဉျခွငျးဟာ အလုပျရှုပျစပေါတယျ။
၅။ Folderတဈခုထဲမှာ ထားတဲ့ Appတဈခုကို ဖှငျ့သုံးပွီး Home Buttonကို နှိပျလိုကျရငျ Home Screenကို မရောကျဘဲနဲ့ သငျမူလဖှငျ့ခဲ့တဲ့ Folderကို ပွနျရောကျမှာ ဖွဈပါတယျ။ Home Screenကို ရောကျခငျြရငျတော့ နှဈခကျြနှိပျရမှာပါ။
၆။ နောကျတဈခကျြက Screenဟာ အရမျးကို တောကျပလှနျးနေ ပါသတဲ့။
၇။ ဒါ့အပွငျ iOS 7မှာ ပါဝငျလာတဲ့ Weather Appဟာ ပုံမှနျ Updateမလုပျဘူးလို့ ဆိုထားပါတယျ။ အသုံးပွုသူ တဈယောကျက သူ့ဖုနျးရဲ့ Weatherဟာ မိုးရှာနတေဲ့ ပုံကိုပဲ တဈနကေုနျပွနပွေီး တကယျတမျး အပွငျမှာကတြော့ နပေူနတော ဖွဈပါတယျ။
၈။ ပွီးတော့ iOS 7မှာ အသဈထညျ့သှငျး ပေးထားတဲ့ Wallpaperအခြို့ဟာ မလှပဘူး ဆိုတဲ့ ဝေဖနျမှုတှနေဲ့လညျး ကွုံနရေပါတယျ။
၉။ အခြို့ Appတှကေတော့ ဖှငျ့လိုကျရငျ ရပျသှားတတျပွီး အဆငျမပွဘေူးလို့လညျး သိရပါတယျ။
၁၀။ ဒါ့အပွငျ ဖုနျးထဲမှာ Alarm Ringtoneဟာလညျး အလိုလြောကျ ပွောငျးလဲသှားပါသတဲ့။
၁၁။ နောကျဆုံး တဈခကျြကတော့ Home Screenကနေ ညာဖကျကို Swipeလုပျလိုကျပမေယျ့ Search Functionပျေါ မလာဘူးလို့ သိရပါတယျ။
Newer ၂၀၁၃ အကောငျးဆုံး ပုဂ်ဂလိကဘဏျဆု ဧရာဝတီဘဏျရရှိ
Older သမ်မတပူတငျ၏ နိုငျငံရေး ဖွတျသနျးမှုမြား ကြောငျးသုံးသမိုငျး သငျရိုးသဈတှငျ ပါဝငျမညျ
17 thoughts on “iOS 7နဲ့ ပတျသကျပွီး Complaintsမြား”
Zaw Htet Lwin says:
Search Option ကိုသုံးချင်ရင် Screenရဲ့ တစ်နေရာရာ (ထိပ်ဆုံးမှအပ) မှအောက်သို့ဆွဲချပါ။
Smiley Sing says:
မသုံးချင်ရင် မသုံးကြနဲ.ပေါ iOS6 ကိုဘဲပြန်သွားပေါ့
Lu soe lay says:
၈။ ပွီးတော့ iOS 7မှာ အသဈထညျ့သှငျး ပေးထားတဲ့ Wallpaperအခြို့ဟာ မလှပဘူး ဆိုတဲ့ ဝေဖနျမှုတှနေဲ့လညျး ကွုံနရေပါတယျ။…. Wallpaper မလှတာ Complaint လား???
La MIn Thant says:
Home screen ကို အောက်စွဲလိုက်တာနဲ့ Search Function ပေါ်ပါတယ်.. ပိုပီး လွယ်ကူသွားတာပါ.. Screen အရောင်တောက်လွန်းလို့တဲ့ ရီရတယ်.. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Ios7ကို ကြိုက်တယ်
ဒီတစ်ခါ ပေါက်ကရတွေလျှောက်ရေးထားတယ် ဘာတွေမှန်းမသိဘူး။
Search က စာမျက်နှာသပ်သပ် မထားပဲ အပေါ်နားကိုလက်နဲ့ဆွဲချလိုက်။ iOS6ထက်တောင်မြန်မြန်ရှာပေးသေးတယ်။
Application မဟန်းဘူး။ App တချို့ကို Update လုပ်။ Crack app ဆိုရင်တော့ PP နဲ့ပြန်ပြင်လိုက်ရင်ရတယ်။ အားလုံးအေးဆေးပဲ။ ဘက်ထရီလဲ ပိုတောင်ကြာရှည်ခံသေးတယ်။2hours Video ကို ၁၅% တောင် မသုံးရဘူး။ Internet သုံးတဲ့တုံ့ပြန်နှုန်းနဲ့ Siri က ပိုတောင်မြန်လာသေးတယ်… iOS7ပိုကောင်းပါတယ်။ လိုက်ခ် လိုက်ခ် လိုက်ခ် 😛
touch ကို အောက်ကို ဆွဲမှ search function ပေါ်လာမှာ
Ye Htut Lin says:
နည်းနည်း လွဲနေပါတယ်။ ကျွန်တော် အိုင်ပက် မီနီမှာ သုံးတာ
၁. Battery သုံးစွဲမှုက iOS6မှာထက် ပိုပြီး သက်သာပါတယ်…
၆. Screen Brightest မချိန်တက်လို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၇. အလကား နေရင်း Weather Update လုပ်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Internet ချိတ်ထားမှ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ (မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင် မှားကောင်း မှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်) 😛
၁၁. Search Function (Spotlight Search) ရှာမတွေ့တာတော့ တော်တော် ဆိုးပါလိမ့်မယ်။ ညာဘက်ဆုံး Page မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ Page အပေါ်ကနေ အောက်ကို ဆွဲချမှ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
နံပါတ် (၁၁) ဖတ်ပြီးတော့ ရေးတဲ့သူကို သုံးရော သုံးဖူးရဲ့လားလို့ ပြန်မေးလိုက်ချင်တယ်ဗျာ။ 🙂
ဟာ တော်တော်ကြီးကိုလွဲတာ >:(
pho chit says:
ye htut lin ,right
နဲနဲလွဲတာမဟုတ်ဘူး တော်တော်လွဲတာ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ရေးထားတယ်။ ဘက်ထရီလည်းသက်သာတယ်။ အင်တာနက်သုံးတာလဲပိုမြန်တယ်။ search ကလည်းပိုမြန်လာတယ် siri ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကလည်းပိုမြန်လာတယ်… ရေးတဲ့သူဘာတွေလျှောက်ရေးထားမှန်းမသိဘူး။ ဒီတခါ အလကား
စာရေးသူဟာ ios7ကိုလုံးဝမသုံးဖူးဘဲ ရေးသည်ဟုထင်မိပါသည်။
စာရေးသူဟာ ios7ကိုသေချာမသုံးဖူးဘဲနဲ့ ရေးသည်ဟုထင်မိပါသည်
aung zi hane says:
အခုထွက်တဲ့ အိုအက်စ် က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သုံးကြည့်လေ့လာပြီးမှ ပြောရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ အခုဟာက အိုင်အိုအက်စ် ဆဲဗင်းက ၆၄ဘစ် ဗားရှင်းပါ… ဂရပ်ဖစ်ကောင်းလွန်းလို့ ဒီလိုရတာပါ။ အိုင်အိုအက်စ်ဆဲဗင်း ကတော်တော်လေးကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ဝေါပေပါတွေမလှဘူးဆိုတာကတော့ အဲဒီလူ မခံစားတတ်လို့ဖြစ်မှာပါ… တော်တော်ကောင်းပါ